100 Polyester Kugadzira Thread Thread Manufacturer & Supplier muChina
Polyester uye Cotton Sewing Threads Manufacturer
Mh Sewing Thread, kusanganisira: Spun Polyester Sewing Thread, Poly / Poly Primary Gore Threading, Cotton / Poly Core Sewing Thread, Polyester Texture Thread, 100% Polyester High Tenacity Thread, Nylon High Tenacity Thread, 100% Nylon Bond Thread.Mh Sewing Thread, pamwe ne: Spun Polyester Sewing Thread, Poly / Poly Core Sewing Thread, Cotton / Poly Core Sewing Thread, Polyester Texture Yarn, Spun Polyester Bag Shutter Thread, 100% Polyester High Tenacity Thread, Nylon High Tenacity Thread, 100% Nylon Bond Thread.
Gore Negore Kubudisa Unyanzvi: 30000 ton
Mucherechedzo: kadhi yemuvara ane 400 mavara anowanikwa, maduku makumi matanhatu anotarirwa anogamuchirwa
20 / 2 Jeans, shangu, makanda, zvigadzirwa zvematehwe, nezvimwewo.
20 / 3 Jeans, shangu, mhombodo, zvigadzirwa zvematehwe, nezvimwewo.
30 / 2 Mhizha yezhizha, mhombodo, zvikudzivirira, etc.
30 / 3 Jeans, matende, zvigadzirwa zveganda, mhombodo, shangu, nezvimwewo.
40 / 2 Mabhete, majasi, masaga, shati, nezvimwewo.
40 / 3 Zvigadzirwa zvekudzivirira, unyanzvi hwokugadzira, shangu, nezvimwewo.
50 / 2 Kuziva nguo, sutu-nguvo, pasi pepurasitiki, nezvimwewo.
50 / 3 Mhizha yezhizha, kupemberesa kusona, mbatya dzemunda, nezvimwe.
60 / 2 Ultrathin machira, pasi pepurasitiki, sutu-gira, etc.
60 / 3 Makhati, zvipfeko, mabhete, mabhesi, mabheji, nezvimwewo.
80 / 2 Kugadzira uye zvipfeko zvokuwana
80 / 3 Zvishongo, sutu-jira, nguo yakazara, nezvimwewo.
Mari yekucheka tsvimbo inenge iri pasi pe1% yese yekugadzira chigadzirwa, asi chinhu chinokosha kugadzirisa unhu hwechigadzirwa. Hapana chinhu chiduku mukusunga tsvimbo. Chero kukanganisa kwekucheka tsvina kunogona kukonzera tsvina yakawanda Mubhadharo wekusona tsvina inenge iri pasi pe1% yemushonga wose wokusunungura, asi icho chinhu chinokosha kugadzirisa unhu hwechibereko. Hapana chinhu chiduku mukusunga tsvimbo. Chero kukanganisa kwekucheka tsvimbo kunogona kukonzera tsvina yakawanda yakasiyana-siyana, nguo, kusona uye basa. Nzira yekusarudza tambo yakakoshwa yakarurama?
Mitsara iyo inotsanangura kushandiswa kwepamusoro kwetambo ndeyokuti:
Hapana kuputika mukumhanya kukuru
Izvozvo zvakasimbiswa kuumbwa
Kwete kusvetuka kunokwidza
Upenyu, kuchengetedza kuchinja kwekutambudzika panguva yekucheka
Nhamba yakakwirira yekudzivisa kubvisa
Kukwana kwepamusoro kwekunakisa, kupfuura nyore nyore kuburikidza nemichina yekushandisa
Nzira yekubudirira sei pamusoro pehutano hunodiwa?
Unhu hwehuyu hwakajeka
Chinokosha chekuvandudza unhu hwekucheka tsvina ndeyeiri yakasvibirira inoshandiswa, nokuti kana iya yakasvibirira isina kukwana, zvakaoma kuvandudza unhu mukudaya nekugadzirisa. Mucheka wechipfuva, urema, bvudzi uye simba rinenge rine simba guru pamusana wekucheka tsvimbo, uye ichocho ndicho chinhu chinokosha chinokanganisa kuputika kwetambo.
Kuchema kubwinya uye kuoma, hatigoni kungofunga nezvemavara akafananidzwa nekutsanya kwemavara, uye isu tinotarisa nezvemavara akaiswa mavara akazoita kuti futi idzoke. Sezvo iyo yakagadzirwa nemucheka yakakosha inokonzera kupera kwemafuro munguva yekudzorerazve.
Chimiro chakanakisa chemukoko chakakosha zvikuru pakusunungura pakutsvaga. Tsvimbo yekusunura ingadai yavhuniwa panguva yekukwirira kukuru, imwe chikamu chikonzero ndechokuti kukonzera kusagadzikana kwekona kusina kufanana, saka bvisa kusunungura nekukurumidza kana kuti kunonoka, kuchaita kuti futi ivhunike apo unwind iri kunonoka, uye tambo ingadai yakavhara isu apo kusunungura kwacho kuchikurumidza, kuchaitawo kuti tambo ivhunike.
Nekucheka tsvimbo, iyo inzira inokosha yekugadzirisa tsvimbo yekucheka. Isu tine XMUMX-2CT yakakura zvikuru yeSIMM yepamusoro-soro, ine Lubetex injection injection yefuta yekuisa mafuta, iyo inotonhora inoshandiswa kune imwe chete, iyo inogona kusungunusa yakisi zvakanyatsonaka uye zvakafanana. kuitira kuti tsvina inogona kuvharwa zvizere nemafuta ekuzodza uye kuwana yakawanda yakafanana nemafuta ekuyera.
Sangano redu rave rakapfuurira kusona midziyo yekuedza, inogona kushandiswa kuenzanisa kushambadzira kusati yatanga kubereka, izvo zvinoita kuti mutengi ashandise kushanda.
MH thread inosuka inogona kuderedza nhamba yemakumbo akaputsika nenzira inoshamisa mukugadzira, kugadzirisa unhu hwekugadzira michina, kuvandudza kukwanisa kwekugadzira uye kugadzirisa mari yekugadzira. Zvichaitawo kuderedza kushanda kwebasa nekugutsikana kwevashandi.